आफन्तको विहेमा हिँडेकी महिलाको ब”ला’त्का’र गरि ह”त्या : श’व मकै बा’रीमा भेटियो ! – Dainiki Online
आफन्तको विहेमा हिँडेकी महिलाको ब”ला’त्का’र गरि ह”त्या : श’व मकै बा’रीमा भेटियो !
06/05/2021 06/05/2021 adminLeaveaComment on आफन्तको विहेमा हिँडेकी महिलाको ब”ला’त्का’र गरि ह”त्या : श’व मकै बा’रीमा भेटियो !
विराटनगर : मोरङमा आफन्तको बिहेमा जान भनेर काम गर्ने कृषि फार्मबाट हिँडेकी एक महिलाको ह”त्या भएको छ। ह”त्या गरेर फ्या’लेको अवस्थामा मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–१ होक्लाबारीकी ३२ वर्षीया सरिता सोरेनको श”व फेला परेको हो।
रतुवामाई नगरपालिका–६ स्थित मकैबारीमा मृ”त फेला परेकी उनको ढिलो गरेर प’हि’चान खुलेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईले जानकारी दिए। उनका अनुसार गत आइतबार टा’उ’को, घाँ”टी, अनुहार र श’रीर’का विभिन्न भागमा चो”ट लागेको अ”र्ध”न”ग्न अवस्थामा सरीताको श”व फेला परेको थियो।
बुवा धनुष सोरेनले छोरीको स’ना’ख’त गर्दै श”व बुझेर अ’न्त्ये’ष्टि’का लागि लगेका छन्। प’हि’चा’न हुन नसकेको श”वलाई विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालको श”वगृ’हमा ल्याएर राखिएको थियो। बुवाले स’ना’ख’त गरेपछि पो”स्टमा”र्टम गरेर श”व परिवारका सदस्यको जिम्मा लगाइएको डीएसपी राईले बताए। उनका अनुसार मृ”त’कको श’री’रका विभिन्न भागमा ग”हि”रो चो”ट रहेका कारण ह”त्या गरेर फ्या”ले”को आ”शं”का”मा ग”म्भीर रूपले घ’ट’नाको अ’नु’स’न्धान अघि बढाइएको छ।
मोरङ प्रहरीका अर्का डीएसपी मञ्जील मुकारुङ नेतृत्वको विशेष टोलीले घ’ट’नाको अ”नु”स’न्धा’न गरिरहेको हो। पो”स्टमा”र्ट’म रिपोर्ट आएपछि थप विषय खु’ल्दै जाने प्रहरीको भनाइ छ। उनको ब”’ला”त्का”रपछि ह”त्या भएको हुनसक्ने अ’नु”मान गरिएको छ। तर य’कि’न हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुई वर्षअघि नै श्रीमान गु’मा’ए’की मृतक सरीता कानेपोखरी–२ मा रहेको कृषि फार्ममा काम गर्थिन्।
उनका एक छोरा पनि छन्। काम गर्ने फार्मबाट आफन्तको बिहेमा जाने भन्दै उनी बि’दा मागेर गत शुक्रबार हिँडेको पाइएको डीएसपी राईले बताए। उनका अनुसार घर न’फर्कि’एकी सरीताको श”व दुई दिनपछि आइतबार ह”त्या गरेर फ्या’लेको अवस्थामा फे’ला परेको हो। पहेँलो कुर्ता र कालो सलवार लगाएकी महिलोको श”व भैँ’सीलाई घाँस का’ट्न’ गएका स्थानीय रामप्रसाद भण्डारीले मकैबारीमा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए।
उनले लगाएका कपडा च्या”ति’ए’का र स’लवा’र पनि सु’र्कि’ए’को अवस्थामा श’व भे’टिएको जानकारी डीएसपी राईले दिए। त्यस्तै घ”ट’नास्थलमा स्क्या’च नभएको रिचार्ज कार्ड पनि फे’ला परेको छ। ‘घ’ट’नाको प्र’कृ’ति र लगाएका कपडा च्या’ति’ए’को तथा सु’र्कि’ए’को अवस्थालाई हेर्दा ब”ला”त्का”र वा ब”’ला”त्का”र प्रयास भएको हो किन भन्ने आ’शं’का गर्ने प्रशस्त आधारह’रु छन्,’ राईले भने, ‘तर पो”स्टमा”र्टम रिपोर्ट प्राप्त भएर अ’नु’सन्धा’न विस्तृत रूपमा अघि बढाएपछि मात्रै यकिन हुन्छ।’
उनका अनुसार घ’ट’नाको प्रकृति हेर्दा ब”ला”त्का”र गरिएको वा गर्न खो”जि”एको र प्र”ति”का’र गर्न थालेपछि ढुं”गा वा अरु कुनै वस्तुले हि”र्का”’ए’र ह”’त्या गरिएको हुनसक्छ। घ’ट’नाको अ’नु’स’न्धानका लागि प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुरको पनि प्रयोग गरेको थियो। उक्त कुकुर घ’ट’ना’स्थ’ल रहेको मकैबारीबाट भि’त्री बाटो हुँदै गाउँसम्म पुग्यो। प्रहरीले घ’ट’नामा सं’ल’ग्न भएको आ”शं’का’मा चार जना व्यक्तिमाथि आवश्यक सो’ध’पु’छ र अ”नु”स”न्धान गरिरहेको छ। तर उनीहरुले घ”ट”ना’मा संलग्नता स्वी’का’र गरि नसकेकाले अ”नु”स”न्धा”नको दायरा थ’प फ’रा’कि’लो पारिएको प्रहरीले जनाएको छ।
Remdesivir Injection कालोबजारी गर्ने व्यक्ति पक्राउ
बाच्नु भन्दा त श’हिद हुनु नै ठिक रहेछ: प्रचण्ड